‘पिर’ जनयुद्ध विरुद्धको एउटा सुनियोजित आक्रमण | Axiskhabar
‘पिर’ जनयुद्ध विरुद्धको एउटा सुनियोजित आक्रमण
फाल्गुन २९, २०७८, २:१८ PM
तीन महिना विदेश गएकी श्रीमतीको फोन आएन भनेर भट्टीमा चाहार्ने र वेश्या खोज्दै हिंड्ने घाइते लडाकू अनि जनयुद्धमा सामेल हुन नपाएपछि वेश्याबृत्तिमा संलग्न हुन पुगेकी वीरंगनाको अस्वाभाविक कथा बनाएर नियोजित षड्यन्त्र गर्ने दुष्टहरुको समर्थन गर्न पुगेका बाबुरामहरु र बादलमार्फत केपीका काखमा रमाउन पुगेका केटाकेटी बुद्धिका भूपू कमरेडहरुदेखि कम्ति दया लाग्या छैन । समाजमा ‘जनयुद्धको योद्धा हुँ’ भनेर जनताबीच स्थापित हुन नपाउन भनेर यो हदसम्मको वेइमानी गरेका छन् वर्गवैरीहरुले । यो नियत र षड्यन्त्र नबुझी समर्थन र विरोध गर्न पुग्ने कुरा बेठिक हुन्छ ।
प्रकाश सपुतलाई योजनाबद्ध उपयोग गरिएको हो । के जनयुद्ध जस्तो गौरवशाली वर्ग संघर्षमा भाग लिने अवसर पाउने सचेत वीरवीरंगनाहरु वेश्यालय धाउने अवस्थामा छन् वा हुन्छन् ? छन् भने ती जनयुद्धका समर्थक वा योग्य मानिस नै थिएनन् वा होइनन् । जनयुद्धको लक्ष्य र उद्देश्यसँग कुनै सम्बन्ध नरहेका त्यस्ता असामाजिक व्यवहारमा रहेका मानिस देखाएर पीर परेका मानिस राम्रो नियतका हुन् त ? पक्कै हैनन् ।
निश्चय पनि जनयुद्धका नेतृत्वबाट श्रमजीवी र सर्वहारा वर्गलाई धोका भएको छ र वीरवीरङ्गनाको अपमान भएको छ । तर, पनि जनयुद्धले कठोर र कष्टसाध्य जीवन जिउने अवस्थामा तरिका सहज बनाउने क्षमताको विकास पनि गराएकै थियो । समाजमा अरु भन्दा कमजोर चेतना र क्षमता पक्कै छैन योद्धाहरुको । वेश्याबृत्ति जस्तो घृणित कार्यमा पुग्नुपर्ने जरुरी हुँदैन सायद । परिणाम वेश्याबृत्तिमा पुर्याएको सायद छैन । कलामार्फत जनयुद्धको अपमान एउटा सुनियोजित षड्यन्त्रको उत्खनन् गरौं र प्रतिरोध पनि गर्दै गरौं !
समाजका सचेत सर्वहारा वर्गको जनयुद्धले सबैभन्दा उचाइसम्म लडेको सबैले देखेकै छन् । नेतृत्व त्यो चेतनाको नभएकाले बीचमै पन्छिएको पनि सबैले देखेकै छन् । संघर्षपूर्ण जीवन बिताएका ती वीरवीरंगनाले समाजमा व्यक्तिगत जीवन बाँच्नका लागि अरु भन्दा अयोग्य हुने कुरै थिएन वा छैन । कथित ‘पिर’ कुनै दयाभावको कहानी हैन, यो त जनयुद्ध विरुद्धको एउटा सुनियोजित आक्रमण हो । जनयुद्धकी वीरङ्गना मिरा राई जसले विश्व कीर्तिमानी रेकर्ड बनाएकी छिन् र विश्वकै दुर्लभ घटना गोरखा जेलब्रेक गर्ने साहसी महिलाहरुको गौरवशाली इतिहास छन् । यी बिषय उनीहरुको गीत बन्छ कि बन्दैन होला ?
बाबुरामहरुलाई त्यसले छुँदैन वा छोएको छैन । उनीहरु नितान्त व्यक्तिगत लाभका लागि जनयुद्धमा थिए कि क्या हो भन्ने भान परिरहेको छ । जनयुद्धको लक्ष्यमा जो छन् उनीहरुले वीरवीरंगनाका अपमान गरेको यस्तो पोइको काखमा पिसाव फेर्ने सिद्धान्त अपनाउँदैनन् । बाबुराम र केपीसम्म पुगेकाहरु यो सिद्धान्त लागू गरिरहेका छन् ।
पुष्पकमलहरुलाई आक्रमणको यो तरिका पनि आवश्यक हैन । यो देशलाई स्वाधीन बनाउने, जनतालाई शोषणबाट मुक्त गर्ने र जनताका तमाम समस्याहरुको समाधानका लागि लागेका वीरवीरंगनाहरुको अपमान गर्दै यो विरुद्धको आक्रमणमा केपी ‘बा’ का काखमा बसेर आरामको जिन्दगी खोज्न पुगेका भूपू कमरेडहरुलाई पनि यसले खासमा बिझ्दैन जस्तो रुप देखाएका छन् ।
जेहोस्, यो वर्गसंघर्ष नै हो !
Previous articleस्थानीय चुनावको मतपत्रमा निर्वाचन चिन्ह हरियो राख्ने आयोगको निर्णयप्रति ओलीको आपत्ति
Next articleचुनावमा माओवादीले जितेन भने जनक्रान्तिका उपलब्धिले हार्छ : दाहाल